हाम्रो धरोहर, हाम्रो दायित्व
You are at Home 2015 August 18 हाम्रो धरोहर, हाम्रो दायित्व
Aug 18, 2015 hakahaki
वैशाख १२ गते आएको भुइँचालोले विश्व सम्पदा सूचीमा परेका हाम्रा धार्मिक सम्पदा पनि क्षतिग्रस्त बनेका छन् । यसरी ध्वस्त भएका संरचना बन्न कम्तीमा पनि १० वर्ष लाग्ने समाचार आइरहेका बेला स्थानीय सहभागिताको पनि कुरा चर्को रूपमा अगाडि आएको छ । स्थानीय कला र संस्कृतिको सम्वद्र्धन गर्नु, त्यसको जगेर्ना गर्नु र भावी पुस्ताका लागि संरक्षण गर्नु स्थानीयको कर्तव्य हो, यसमा सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । विदेशी दाताबाट आएको आर्थिक सहयोगलाई पारदर्शीरूपमा उपयोग गर्दै स्थानीयको सहभागितामा पुनर्निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनु नै उत्तम विकल्प हो भन्ने स्थानीयले बताउँदै आएका छन् । यसपालिको जनसरोकारमा निशा ओलीले सम्पदा पुनर्निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाको भूमिका कस्तो रहन्छ भनेर सोधेकी छन् ।
सम्पदा पुनर्निर्माणमा स्थानीयको भूमिका
गत वैशाखमा आएको विनाशकारी भुइँचालोमा हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाले ठूलो क्षति व्यर्होनुपरेको छ । नेपाललाई विश्वमा चिनाउने सम्पदा क्षतिग्रस्त हुँदा हामी स्थानीय समुदाय नै चिन्तित भएका छौं । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक दिनहुँ आउँथे, अहिले त वसन्तपुर नै शून्य भएको छ । यसको पुनर्निर्माण गर्न सरकारले चासो देखाउनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारको काम बोल्नेमात्र भएको छ । बोलेर मात्र संस्कृतिको पुनर्निर्माण सम्भव छैन, अब केही गर्ने बेला भएको छ । काठमाडौं त सम्पदाहरूको सहर हो । भुइँचालोले त्यही सम्पदालाई ढालेपछि हाम्रो अस्तित्व नै मेटिने सम्भावना बढेको छ । त्यसैले स्थानीय बासिन्दा पनि अब सचेत हुने बेला आएको छ । सम्पदाकै कारणले काठमाडौं नेपालको राजधानी भएको हो भन्ने मान्यता छ । सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि सरकार, नीजि तथा स्थानीय निकाय तथा बासिन्दाबीच समन्वयको आवश्यकता छ । सम्पदा पुनर्निर्माणमा बजेट सरकारले दिनुपर्छ तर मुख्य भूमिका, रेखदेख र सम्पदा संरक्षणमा स्थानीयको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । भुइँचालोले गर्दा स्थानीय बासिन्दा पनि त्रसित र आर्थिक रूपमा कमजोर भएका छन्, त्यसैले सरकार, पुरातŒव विभाग र स्थानीय सहभागितामा सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
आफैँले बनाउने हो सम्पदा
सबैभन्दा पहिले त राष्ट्र पुनर्निर्माण गर्ने योजना र संकल्प हुनुप¥यो । योजना तर्जुमा भएपछि स्थानीयको सहभागितामा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । सतही रूपमा हेर्दा हामीसँग साधन, स्रोत र जनशक्तिको कमी देखिन्छ तर बेरोजगार युवालाई तालिम दिएर पुनर्निर्माणमा लगाउन सकिन्छ । आफ्नो गाउँ, ठाउँ र भत्केका सम्पदाहरू कुनै विदेशी आएर बनाउने हैनन्, आफ्नो ठाउँ, गाउँ र सम्पदाको संरक्षण हामी आफैँ गर्नुपर्छ ।
सरकारले स्पष्ट खाका बनाई स्थानीय युवालाई परिचालन गरेर पुनर्निर्माण अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । नवनिर्माणका लागि स्थानीय स्तरबाट स्थानीय युवाले चन्दा संकलन गर्नेदेखि लिएर भौतिक सामाग्री जुटाउन सरकारलाई सहयोग गर्न सक्दछन् । सांस्कृतिक धरोहर हाम्रा हुन् भन्ने भावनासहित अगाडि बढ्ने हो भने पुनर्निर्माणको काम सहज हुन्छ । युवाको उचित व्यवस्थापन र श्रमको सही ठाउँमा प्रयोग हुनुपर्छ । रोजगार नपाएर विदेसिने युवा पनि राष्ट्र पुनर्निर्माणमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
सुरक्षाको जिम्मा स्थानीय बासिन्दालाईविनाशकारी भुइँचालो र त्यसपछि लगातार आएका पराकम्पनले देशभर ७१४ सम्पदामा क्षति पुगेका खबर आएको छ । त्यसमध्ये १३३ वटा पूर्ण ध्वस्त भएका छन् । ध्वस्तको सूचीमा रातो मच्छिन्द्रनाथ, काष्ठमण्डप, त्रिपुरेश्वर महादेव, नौतले दरबार, प्रताप मल्लको सालिक, लक्ष्मीनारायण मन्दिर आदि छन् । यसरी ध्वस्त भएका संरचना बन्न कम्तीमा पनि १० वर्ष लाग्ने समाचार आइरहेका बेला स्थानीय सहभागिताको कुरा चर्को रूपमा अगाडि आएको छ ।
स्थानीय कला र संस्कृतिको सम्वद्र्धन गर्नु, त्यसको जगेर्ना गर्नु र भावी पुस्ताका लागि संरक्षण गर्नु स्थानीयको कर्तव्य हो, यसमा सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ । विदेशी दाताबाट आएको आर्थिक सहयोगलाई पारदर्शी रूपमा उपयोग गर्दै स्थानीयको सहभागितामा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु नै उत्तम विकल्प हो जस्तो मलाई लागेको छ । पुनर्निर्माण भन्ने कुरा आजको भोलि हुँदैन, यसका लागि समय लाग्छ, सो समयसम्म पुरातात्विक महŒवका सामानको संरक्षण गर्नु पनि सरकारका लागि चुनौती बनेको छ । बर्खायाम सुरु भएकाले पुराना संरचनाको सुरक्षा गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।
सम्पदा पुनर्निर्माण राज्यको दायित्व
देशका कतिपय सांस्कृतिक र प्राकृतिक महŒव बोकेका स्थानहरूमा हामी देशवासीले मात्र नभई पुरा विश्वले गर्व गरिरहेको हुन्छ । यी र यस्तै सांस्कृतिक र प्राकृतिक महŒव बोकेका सम्पदालाई सयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकरण गर्ने गर्दछ । भुइँचालोमा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाको नराम्रो क्षति भयो, खासगरी वसन्तपुर, पाटन र भक्तपुर दरबार स्क्वायरसाथै स्वयम्भुनाथ, बौद्धनाथ र चाँगुनारायण मन्दिरजस्ता सम्पदामा ठूलो क्षति पुग्यो । देशको गरिमाको रूपमा रहेका र पर्यटकलाई लोभ्याउने यस्ता सम्पदाको क्षतिले पर्यटन उद्योगलाई पनि पूर्ण रूपमा असर गर्ने देखिन्छ । यस्ता सम्पदाको पुनर्निर्माण, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सकिएन भने मुलुकलाई नै घाटा हुनेछ ।
यस्ता सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा खासगरी सरकारले ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ, सरकारलाई निजी क्षेत्र र स्थानीयले पूर्ण सहयोग गरेमा देशभित्रै रहेको स्रोत र साधनको परिचालनमार्फत हाम्रा सम्पदाले पहिलेकै आकार पाउन सक्नेछन्, यस्ता सम्पदाको पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समन्वय गरेर आउने आर्थिक वर्षको बजेटबाट पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक लागत अनुमान गरी निश्चित बजेट छुट्याएर स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सहभागिता अपरिहार्य
भुइँचालोले देशमा धेरै धनजनको क्षति भएको छ । गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखाकासाथै सबैभन्दा धेरै पुरातात्विक संरचना भएको भक्तपुर अनि काठमाडौँ जिल्ला निकै प्रभावित भएका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा विशेष भूमिका खेल्ने पर्यटन व्यवसाय यसबाट बढी प्रभावित भएको छ । अरू विभिन्न क्षेत्रको पुनःसंरचनासँगै पुराताŒिवक तथा साँस्कृतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
विशेषतः त्यस्ता किसिमका संरचना पुनर्निर्माण गर्दा एउटा प्रश्न सबैभन्दा पहिले आउने गर्छ, के फेरि पुरानै आकार र उस्तै आकर्षक संरचना बन्ला त ? पुनर्निर्माण गर्ने बेला विशेषगरी पुरानो ढाँचालाई मर्न दिनुहुँदैन अनि सम्भव भएसम्म भत्किएको संरचनाबाट नै पुनःप्रयोग गर्न सकिने सामग्री जस्तै इँटा, ढुंगा, काठ तथा अन्य सजावटका सामान प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । अझ महŒवपूर्ण कुराचाहिँ स्थानीयवासीको संलग्नता अत्यावश्यक हुन्छ । स्थानीयवासीसँग यस्ता सम्पदा उनीहरूको पहिचानमा मात्र नभएर जीवनयापनसँग पनि जोडिएको हुन्छ । पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीयवासीलाई विशेषगरी युवा वर्गलाई प्रत्यक्ष संलग्न गराउनु पर्दछ । ज्यालादारीमा वा स्वयंसेवकका रूपमा उनीहरूको दक्षता र योग्यताअनुसार उचित परिचालन गर्नुपर्दछ । स्थानीयलाई परिचालन गर्नुको अर्को फाइदा त्यसभित्रका बहुमूल्य सामानको सुरक्षा पनि हुन्छ । साथै पुनर्निर्माणका लागि स्थानीयलाई संलग्न गर्दा सम्पदा संरक्षण समिति बनाएर उनीहरूलाई जिम्मेबारी बोध गराउन सकिन्छ । भविष्यमा हुनसक्ने अरू विपत्तिलाई ध्यान दिएर विशेषज्ञको प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशनमा संरचनाको मर्मत गर्न चुक्नुहुँदैन । यसो गर्न सकियो भने देशको इतिहास र संस्कृति झल्किने संरचना पुनः पुरानै आकारमा सबैको मन लोभ्याउने हुनेछन्, जसले देशको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकासमा टेवा पुग्नेछ ।
स्थानीयले नै गर्नुपर्छ
विश्व सम्पादको सूचीमा रहेका हाम्रो सांस्कृतिक धरोहरलाई २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भुइँचालोले तहसनहस पारे तापनि केही सम्पदा हामीसँग अझै बाँकी छन् । पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा क्षति भएका छन् । स्रोतसाधन र उपयुक्त नीति नियम समयमै बन्न नसक्दा देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । सांस्कृतिक सम्पदा उठ्न नसक्नु भनेको नेपालीका लागि लाजमर्दो कुरा हो । हामीमा स्रोत, साधनको कमी छ, जनशक्ति अभाव छ, साथसाथमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको पनि अभाव देखिएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा भएको खिचातानीले देश विकासमा नराम्रो असर परेको छ । तसर्थ, हामी चुप लागेर बस्ने बेला छैन । स्थानीय बासिन्दाले नै केही गर्ने समय आएको छ । सांस्कृतिक धरोहर भनेको हाम्रो मौलिक सम्पदा हो । यो लोप भयो भने सम्पदा र संस्कृति नै लोप हुनसक्छ । भावी पुस्ताले नेपालको सम्पदा देख्न पाउँदैनन्, त्यसैले यो लाचार सरकारको भर नपरी हामीले नै केही गर्ने बेला आएको छ । हामी कुनै पनि हालतमा मौलिक सम्पदाको लोप हुन दिँदैनौं ।
स्थानीय जनताको पहलमा सरकारले केही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसअन्तर्गत पुनर्निर्माणका लागि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने । पुनर्निर्माण गर्दा आउनसक्ने कानुनी व्यवधानलाई पूर्णरूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विदेशीको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग
भुइँचालोले मुलुकको चिनारी बनेर खडा भएका विश्वसम्पदा सूचीका ऐतिहासिक धरोहर ध्वस्त भए । यसले व्यापक चिन्ता उत्पन्न गराएको छ तर के ती सम्पदा यसपटक मात्र ध्वस्त भएका हुन् त ? पक्कै हैन । पहिला ध्वस्त भएका सांस्कृतिक सम्पदा स्थानीयको सहभागितामा पुनर्निर्माण भएकै हुन् । अहिले पनि स्थानीयकै सहभागितामा पुनर्निर्माण हुनेछन् ।
भुइँचालोले गारो चर्काएका सम्पदालाई बर्खायामको झरीले झनै क्षति पु¥याउन थालेको छ । बर्खे झरीले मठमन्दिरमा आकर्षक बुट्टा भरिएका टुँडाल, छाना थेग्न प्रयोग गरिएका काठ, झ्याल र ढोका कुहिन सक्छन् । सरकारको मात्रै मुख नताकेर स्थानीयले आफ्नो ठाउँ वरिपरि रहेका त्यस्ता सम्पदा थप क्षति हुनबाट जोगाउन अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । देशका विभिन्न भागमा क्षति भएको हुनाले सबै ठाउँमा सरकारले समयमानै आफ्नो उपस्थिति जनाउन नसक्ला, यसलाई अन्यथा नलिई स्थानीय नै आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउन अग्रसर हुनुपर्दछ ।
भुइँचालोले ठूलो मात्रामा क्षति गरेका बेला विदेशीको सहयोगलाई अन्यथा लिनुहुँदैन तर उनीहरूको सहयोग आर्थिक र प्राविधिक रूपमा मात्र लिनुपर्छ । पुराताŒिवक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महŒव बोकेका सम्पदाको आफ्नै मौलिक महŒव रहेको हुनाले त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्न स्थानीयलाई अग्रसर गराउनुपर्दछ ।
पुनर्निर्माणका लागि दबाब आवश्यक
भुइँचालोले नेपालमा गरेका विनाशमध्ये विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश पनि एउटा महŒवपूर्ण पाटो हो । मुलुक बिस्तारै सामान्यतातर्फ अग्रसर हँुदै गर्दा यस्ता सांस्कृतिक धरोहरको पुनर्निर्माण पनि महŒवपूर्ण देखिन्छ । विश्व पर्यटन र संस्कृतिमा महŒवपूर्ण यी धरोहर पुनर्निर्माण गर्न सरकार र स्थानीय तवरबाटै यथाशीघ्र पहल हुनु जरूरी देखिन्छ र दुवै पक्षको भूमिका पनि महŒवपूर्ण रहन्छ । यी धरोहरको पुनर्निर्माणमा सरकारी तवरबाट युनेस्कोलगायत अन्य निकायसँग गर्नुपर्ने औपचारिकता पूरा गरी दाता र स्थानीयको समन्वयमा निर्माण थालनी गर्नुपर्छ र यो कार्य अत्यन्त पारदर्शी, विश्वसनीय साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनुपर्छ ।
यसैगरी यो पुर्निर्माणमा स्थानीयको भूमिका पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण रहन्छ । स्थानीयले यी धरोहरलाई आफ्नो जिम्मेवारीसमेत ठानी त्यहाँका पुराताŒिवक वस्तुको संरक्षण गर्नुपर्छ साथै स्थानीय तवरबाटै सरकारलाई पुनर्निर्माणका लागि दबाब दिन सकिन्छ । यसैगरी आवश्यक परेको खण्डमा श्रमदान गर्ने र आफूसक्य धनदानसमेत गर्न सक्छन् । कसैसँग यो विषयको सीप भएमा त्यसको पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, स्थानीय तवरमा समिति खडा गरी कार्यानुगमन र सहयोग लिन सकिन्छ । सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा सरकार र स्थानीय सहभागी रहने हो भने यो काम सहजरूपमा सम्पन्न हुन सक्छ ।
बर्ष १४, अंक ६, साउन २०७२